Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo e-UK 2022
Disemba 8, 2021 UAdaeze Nwachukwu
Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo e-UK
INgilane yaziwa ngokubanzi ngokuba liziko lemfundo kwihlabathi liphela kwaye inezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK esixoxe ngazo apha.
INgilani likhaya kwezinye iikholeji kunye namaziko agqwesileyo kwihlabathi ngaphaya komda wesikolo samabanga aphantsi. Zininzi kakhulu izikolo zaseprayimari ezinokuthi zithathwe njengezona zikolo zaseprayimari zigqwesileyo e-UK, nangona zisenokunganconywa njengezona zikolo zaseprayimari zigqwesileyo e-UK.
Abafundi bahamba iimayile ezininzi ukuba babe nemfundo esemgangathweni kwaye abafuduki baye bagqiba ngokungathandabuzekiyo ukuhlala e-UK ngenxa yaso sonke isixeko esizukileyo esigcinelwe abemi, kubandakanya nomgangatho wemfundo ekhoyo kuye wonke umntu.
Ezona zikolo zaseprayimari zingcono kakhulu e-UK isenokungabi zezona zinezakhiwo zintle kodwa zezona zivunyiweyo njengezona zigqwesileyo kwiimpumelelo, nasekufundeni.
Imfundo yaseprayimari isisiseko sokukhula komntwana ngamnye. Yaye kwiimeko ezininzi, indlela umntwana akhula ngayo kwiminyaka yakhe yamva ixhomekeke kuhlobo lwemfundo umntwana ayifumene kwiminyaka yokukhula; oku kungenxa yokuba kulula ukuyalela umntwana omncinane kunokuqinisekisa umntu omdala.
Iinqobo ezisemgangathweni zimiliselwa ukusuka kusana ebantwaneni kwaye ngandlela ithile ezi nqobo zisemgangathweni ziyabambelela kwaye kunzima kakhulu ukuzithathela kude kuye iinqobo ezisemgangathweni umntwana akhule ngazo. Kungenxa yoko le nto kufuneka uthumele iiwadi zakho ezikolweni zigxile ekunikeni umntwana okona kulungileyo. Ezona zikolo zaseprayimari zibalaseleyo e-UK zivelele ngokunika nawuphi na umntwana okona kulungileyo.
Kubalulekile ukunika umntwana wakho eyona mfundo ibalaseleyo enokuba yiyo, yiyo loo nto izikolo ziphumeza konke okusemandleni azo ukuze zibonise abantwana kwindlela elungileyo. Apha ngezantsi kukho uluhlu lwezona zikolo zisixhenxe zibalaseleyo zaseprayimari e-UK onokufuna ukuzijonga. Qhubeka, ufunde.
7 Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo e-UK
2. Isikolo samabanga aphantsi iBarnes
3. ISikolo iCrwen Prayimari
4. Isikolo sika-Akiva
5. Isikolo saseNorth London Collegiate
6. I-St Andrew's Church of England (VA) yeSikolo sasePrayimari
7. Isikolo iWestminster
Isikolo samabanga aphantsi Fox
Isikolo samabanga aphantsi iBarnes
Isikolo samabanga aphantsi saseCurwen
Isikolo saseNorth London Collegiate
I-St Andrew's Church yaseNgilani (VA) kwisikolo samabanga aphantsi
Isikolo samabanga aphantsi iFox sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK. Yasekwa ngo-1842 njengesikolo sesisa ngu-Hon. UCaroline Fox. Isikolo saseprayimari saseFox sisisiseko sabantwana abaphakathi kweminyaka eyi-4 kunye ne-11. Isikolo samabanga aphantsi sase-UK sikwindawo yaseRoyal Borough yaseKensington kunye ne-Chelsea.
Kwisikolo samabanga aphantsi iFox, kukho inkolelo enzulu kwinkcubeko yokugqwesa kunye nemfundo esemgangathweni, esesinye sezizathu ezininzi zokuba kutheni umbutho ulungele ukunika eyona nto ingcono kubantwana ababhalise esikolweni. Abafundi bonwabile, bazithembile, bazimele, kwaye bayakhuthazeka mihla le ukuba bazamele okona kungcono banako nokufikelela kwincopho yabo ngabanye okanye njengeqela.
Kukho isiseko esiluqilima seenqobo ezisemgangathweni ekufuneka zisetyenziswe ekwenzeni ukhetho olunolwazi kuluntu lwasekhaya nolwehlabathi phakathi kwabafundi.
Akufane kwenzeke ukuba ufumane abantwana kunye nabafundi abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo kunye neenkolelo, kodwa ngamnye kubo ufundiswa ukuba amkele omnye njengoko amkelwe. Kukho umanyano kwiyantlukwano phakathi kwabafundi kwaye oku kwenza ukuba kubekho uhlobo olungcono lwabafundi abanokuthi bakhokhelele ihlabathi kungakhathaliseki ukuba ngubani kwaye ngubani na abemi. Kulula kwezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
IWebhusayithi yeSikolo ilapha
Isikolo samabanga aphantsi iBarnes sisikolo sikarhulumente esaziwayo e-UK. Ifumene ukwamkelwa ngamaqumrhu alawulayo ngenxa yezizathu ezininzi nangona esona sizathu sibalaseleyo sikukuba kuhlala kukho into yakho kwisikolo samabanga aphantsi iBarnes. Isikolo samabanga aphantsi iBarnes sifana nequla lolwazi.
Nokuba unokuba ngumzali, umntu onomdla wokusebenza kwisikolo samabanga aphantsi esidumileyo sase-UK, okanye umntu ojonge izikolo zaseprayimari eziqhuba kakuhle e-UK, yindawo apho ufunda khona into entsha yonke imihla. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Isikolo samabanga aphantsi iBarnes sibekwe ngokukhawuleza ngaphaya koMlambo iThames, kuMazantsi-ntshona eLondon. Kwisitalato iCross Street.
Enye yeenjongo eziphambili zesikolo esesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK kukuqeqesha abafundi ukuba bazimisele kwaye bathembele, ngoluhlu olubanzi lwezakhono zokufunda ngokubanzi eziya kuba luncedo kubo nakwihlabathi elibangqongileyo. kubo bonke ubomi babo.
EBarnes, yonke into ibalwa kwaye icwangciswe ukuvelisa iziphumo eziphezulu. Kodwa ngesicwangciso esibaliweyo njengoko esinokuthi, ngokuqinisekileyo, sithathe inqanaba elithile lokuzinikela kwabafundi, isikolo senze ukuba abafundi bakwazi ukonwabela ubuntwana babo kwaye banxibelelane kakuhle nabanye abantu ngemisebenzi yolonwabo.
Ikharityhulamu esiqhutywa ngayo isikolo samabanga aphantsi iBarnes imodelwa ngendlela yokuba abafundi balungiselele ubomi kunye nomsebenzi kule nkulungwane yamashumi amabini ananye, ingawutyesheli umkhwa osoloko uvela kubuchwepheshe ehlabathini. Abantwana baseBarnes bakhula benembono yezakhono ezibalungele kakhulu ebomini kunye nolwazi lokuba kufuneka bavule iingqondo zabo kwizinto ezinokwenzeka kunye nezakhono. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
IBarnes Primary sisikolo esingaphezu komndilili. Ipesenti yabafundi abaziwa njengabakufanelekelayo ukutya esikolweni simahla ingaphantsi kancinane kumndilili wesizwe.
Malunga nesiqingatha sabafundi baseBritani abaMhlophe, kunye nekota evela eYurophu kunye neentlobo ngeentlobo zezinye iintlanga ezincinci. Umlinganiselo ongaphezulu kunomndilili wabafundi abathetha isiNgesi njengolwimi lwesibini, kwaye iqaqobana labafundi lifika esikolweni lisazi isingesi esincinci okanye lingasazi nhlobo.
Umyinge wabafundi abanobunzima bokufunda, bokuziphatha, kunye nokunxibelelana ngokubanzi ngumndilili, abanye abafundi bafumana ubunzima obukhulu. Nangona kunjalo, isikolo senza umzamo wokunceda wonke umntwana kulo naluphi na uhlobo lobunzima
Umlinganiselo ongaphezulu kunomndilili wabafundi uneemfuno zemfundo ezizodwa. Kukho amabhaso aliqela anikezelwe kwesi sikolo, kubandakanywa iArtmark Gold, iActivemark Gold, iMbasa yeZikolo eziMpilo, uMgangatho weArhente yeZakhono eziSisiseko, kunye neMbasa yokuSingqongileyo yeZikolo zaseLondon.
Isikolo samabanga aphantsi iCurwen sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK ezivulelwe abafundi abaphakathi kweminyaka emi-3 ukuya kweli-11 ubudala. Ngomhla woku-10 kuSeptemba 1.
Intembeko isekwe kwintsebenziswano kwaye iqinisekisa eyona mfundo isemgangathweni kangangoko kubafundi kwaye ikwakhawulelana neemfuno zoluntu lwasekuhlaleni. Ukwamkelwa esikolweni kulukhuphiswano kwaye akukho lula. Kungaqhagamshelwana nomphathi wokwamkelwa kwabafundi ngale nombolo 02084720290.
Ikharityhulamu yaseCurwen igxininisa kumntwana-ukuqinisekisa ukuba bafumana okona kulungileyo kwihlabathi labo lokukhula nelobuntwana ngaphandle kwamava abo eklasini. Abafundi bafundiswa ukuphuhlisa izakhono zabo zokuFunda, ukuBhala, iMathematika, kunye nazo zonke ezinye izifundo eziyimfuneko kulwazi lwabo olusisiseko nesiseko sehlabathi abaphila kulo.
Esi sikolo sizinze ePlaistow ngaphakathi kweLondon Borough yaseNewham kwaye samkelwa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Isikolo se-Akiva yayisesinye sezikolo zamabanga aphantsi zamaYuda e-United Kingdom ezasekwa luluntu lwamaYuda olunenkqubela. Isikolo se-Akiva sibonelela ngokukodwa kumalungu oHlaziyo kunye noluntu lweLiberal kunye neSinagoge eNtsha yaseNorth London.
Yaba sisikolo sokuqala soSuku lwamaJuda emhlabeni kunye nesikolo sokuqala samabanga aphantsi eTennessee ukuba yi-STEAM (iSayensi, iTekhnoloji, ubuNjineli, uBugcisa, kunye nemathematika) yaqinisekiswa yi-AdvancED ngo-2019.
U-Akiva ukholelwa ekufundiseni umntwana ngesisa ngokupheleleyo- ngokwasengqondweni, ngokwasemzimbeni, kunye nazo zonke ezinye iinkalo eziyimfuneko ezingcwele ukuze asebenze kakuhle umntwana. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Ifumaneka kwiZiko laseSternberg lobuYuda eUnited Kingdom, iSikolo i-Akiva sisikolo sabantwana abancinane esidityanisiweyo sesiNgesi kunye nesikolo samabanga aphantsi sabafundi abafanelekileyo kulwimi lwesiNgesi kunye nesiFrentshi. Abafundi abadlula e-Akiva basoloko bemkelwa ngokulula kwezona zikolo zikhethiweyo zabucala kunye nezikolo eziphakamileyo.
Yachongwa njengesikolo sokungena esiziifomu ezimbini ukulungiselela ukufudukela kwicandelo likarhulumente eLondon Borough yaseBarnet. Umgaqo ongundoqo okhokela imigaqo-nkqubo yolwamkelo lwesikolo kukuba eyona nto iphambili ifanele inikwe iintsapho ezizinikele ngamandla kubuYuda obuqhubela phambili kwaye isekuphela kwesikolo samaYuda esithe sajongana neemfuno zabo zamaYuda ngobubele.
Amalungiselelo okwamkelwa kwabafundi abonakalisa kwakhona unxibelelwano lwesikolo. Eyokuqala likhonkco nabahlali abachaphazelekayo kwimibutho yoHlaziyo neNkululeko eyaseka esi sikolo. Eyesibini likhonkco kwiSinagoge eNtsha yaseMntla London, ekwakhiwe kumhlaba weManor House.
Abantwana besikolo bafundiswa ukuba babe ngabemi abonwabileyo, abazithembileyo nabanolwazi, abanothando lukaSirayeli, ukuba bazihlonele, bazihlonele abanye, nehlabathi. Kulula ukuba sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Isikolo saseNorth London Collegiate sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK. Yasekwa ngo-1850. Sisikolo samabanga aphakamileyo esizimeleyo samantombazana, esise-Edgware, eLondon Borough of Harrow kunye nezikolo ezingoodade ababini kwiSiqithi saseJeju, eMzantsi Korea, kunye nesinye eDubai ezilusuku lokufundisana kunye. izikolo zokubhoda ezibonelela ngekharityhulam yaseBritani. Isikolo esisesinye sezona zikolo zaseprayimari zigqwesileyo e-UK lilungu lombutho weZikolo zamantombazana.
Phakathi kweenjongo ezininzi zesikolo saseprayimari sase-UK siphezulu zezi njongo zilandelayo. Isikolo sibonelela ngemfundo yamabhongo ukwenzela ukuba wonke umfundi asebenzise kangangoko ubuchule bakhe bobukrelekrele. Esi sikolo sikwajolise ekukhuliseni iqela lootitshala abaqeqeshiweyo nabakhuthaza abafundi ukuba bathande izifundo zabo esikolweni kunye nomoya wokufunda.
Abafundi bayakhuthazwa ukuba bamkele imingeni emitsha ngokuzithemba, kwaye baphendule kwiingxaki ngendlela eyomelelayo nezimiseleyo. Esi sikolo sikwajolise ekuphuhliseni uluntu olujonge ngaphandle, olucinga ngamazwe ngamazwe olukhuthaza intlonipho novelwano, inkonzo eluntwini, kunye nentatho-nxaxheba eyakhayo kuluntu nakwihlabathi eliphakathi kwabo.
Sisikolo samabanga aphantsi sabucala eLondon kwaye sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK. KwiSikolo saseNorth London Collegiate, ukugqwesa ligama lokujonga, kwaye abafundi bahlala bexatyiswa, bexhaswa, kwaye bekhuthazwa ukuba banabe amaphiko abo kwaye babhabhe.
I-St Andrew's Church of England (VA) Isikolo samabanga aphantsi siphantsi kweDiocese yase-St Albans. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari zigqwesileyo e-UK, kunye nesicelo sokungeniswa ngokuzithandela sincediswa kwisikolo sika-E sabantwana abaneminyaka eyi-4-11 eLondon Borough yaseBarnet.
Abantwana bafundiswa imilinganiselo yobuKristu yonke imihla kanye njengokuba befundiswa imilinganiselo yaseBritani exhasa imisebenzi yemihla ngemihla esikolweni ukuze baqinisekise ukuba abantwana bakhuselekile, bonwabile, yaye baphathana ngembeko nangenkathalo.
Umbono wesikolo kukukhulisa abantwana abazakukhula bafunde noThixo. Umbono wabo ucatshulwe kwiBhayibhile Engcwele, kwindinyana yeyoku-1 kwabaseKorinte. “Lowo utyalayo akanantlukwano nalowo unkcenkceshayo. UThixo uya kubavuza elowo ngokomsebenzi awenze elowo. Eyoku-1 kwabaseKorinte 3 v 8.
Ukwenzela indawo yokwamkelwa esikolweni, abazali balindeleke ukuba bafunde umgaqo-nkqubo wokwamkelwa kwabafundi baze balandele isikhokelo esinikiweyo. Esi sikolo sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Isikolo saseWestminster sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zaseprayimari e-UK.
Yaziwa ngokubanzi njengekuphela kwesikolo saseLondon esihlala kwindawo yaso yokuqala kwaye okwangoku, esi sikolo sigqame njengelinye lamaziko emfundo aphambili e-UK.
Iirekhodi zokuqala zesikolo sase-Westminster zaqala ngo-1370s kwaye zigcinwa kwiGumbi leMuniment yaseWestminster Abbey. Iinxalenye zezibonelelo zangoku zesi sikolo zisusela kwinkulungwane ye-10 yeAnglo-Saxon Abbey eWestminster. Isikolo sibanga kwiingxelo zaso zonyaka ukuba sasekwa ngumyalelo okhutshwe nguPope Alexander III ngo-1179, nangona ubungqina boku bungabonakali.
Yeyabafundi abahleliyo nabasemini. Kangangeminyaka eyadlulayo, iWestminster ibisoloko iyigcina indawo yayo njengekhaya lemfundo labona bantu banamandla okucinga, amagcisa, abadlali beqonga, iimvumi, izazi ngezoqoqosho, izazinzulu, iintanda-bulumko, oosomashishini bezentlalo, iingcali zeelwimi, ababhali, kunye neendlela ezahlukeneyo zobuntu.
Kwisikolo sase-Westminster, ukugqwesa kukhuliswa kakhulu kuba yenye yezinto ezixabisekileyo ezingundoqo zesikolo, kwaye ukucinga ngokuzimeleyo kuyakhuthazwa kwaye kusetyenziswe kubafundi. Akumangalisi ke ngoko ukuba, esi sikolo saziwa ngokubanzi
I-Under School igwetywa ngokudibanisa iimviwo zangaphakathi kunye nodliwano-ndlebe kwiminyaka eyi-7, 8, kunye ne-11.
Ukungena kwiSikolo esiKhulu kwiminyaka eyi-13 ubudala, i-ISEB Common Pre-Test, isethi yeemviwo ezisemgangathweni, zikazwelonke zokungena kwizikolo ezizimeleyo, ukungena okusemgangathweni; isethi yomjikelo wesibini yeemviwo zangaphakathi kwisiNgesi nakwiMathematika; okanye uMngeni, iseti yangaphakathi yeemviwo zokungena kwi-scholarship; ngokunjalo nodliwano-ndlebe.
Ukungena kwiSikolo esiKhulu kwiminyaka eyi-16 kugqitywa ngeemviwo ezikhethekileyo kunye nodliwano-ndlebe kwaye kuxhomekeke kwiziphumo ze-GCSE. Eli kuphela kwendawo ekungenwa kuyo amantombazana, kwaye bambalwa abafana abangena apha nyaka ngamnye.
Uluhlu lweeNyuvesi ze-Intanethi zeFake eMelika, e-UK naseIndiya
Iikhosi ze-22 zasimahla kwi-Intanethi ezineZatifikethi e-UK
I-10 ephezulu yeBhola ekhatywayo yase-UK eneziQhagamshelo zeSicelo
I-10 yeeNyuvesi zeNjineli eziPhambili zeAeronautical e-UK
Izikolo ezili-13 zePrayimari eziBalaseleyo eBerwick
Ezona zikolo zi-15 ziPhambili zeZikolo zasePrayimari eLondon
Izikolo eziPhambili zePrayimari ezili-15 eLagos eNigeria
Post Previous:Izikolo eziPhezulu ezili-10 zaBucala eNgilani
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zoMthetho eYurophu